कोरोनबाट बच्न आइपिएलको छुट्टै दुनियाँ : ८० दिनसम्म ‘बायो बबल’मा, बाहिर निस्कन कडाई
8th September 2020, 03:03 pm | २३ भदौ २०७७
फोटो : ipsnews.net
आइतवार इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)को तालिका जारी गरिसकिएको छ। २० अगस्टको आसपासमा आइपिएल टिमहरु दुबइ पुगिसकेका छन्।
आइपिएलका लागि भनेर सबै खेलाडी, प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ र म्याच अफिसियल्सलाई बायो सेक्युर इन्भारमेन्ट(बायो बबल) मा राखिएको छ। उनीहरु ८० दिनका लागि बायो बबलमा छन्।
के हो त बायो बबल?
सजिलो गरी भन्ने हो भने यो यस्तो वातावरण हो जसमा रहनेहरुको बाहिर रहनेहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहँदैन। अर्थात आइपिएलमा रहने खेलाडीदेखि लिएर सपोर्ट स्टाफ, म्याच अफिसियललगायत होटलस्टाफ र कोरोना टेस्ट गर्ने मेडिकल स्टाफ सम्मलाई तोकिएको स्थानबाट बाहिर जाने अनुमति हुँदैन। यो कोरोना संक्रमण रोक्ने उपाय भएको बताइएको छ।
यसले कसरी काम गर्छ त?
आइपिएलमा सहभागी खेलाडी, कोच, सपोर्ट स्टाफलगायतको दुबइ पुग्नुअघि नै दुईपटक कोरोना परीक्षण भएको थियो। त्यहाँ पुगेपछि पनि सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखियो र तीनपटक कोरोना परीक्षण गरियो। त्यसमा रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेहरु बायो बबलमा गए। परीक्षणको क्रममा चेन्नइ सुपर किङ्स्का १३ जनामा कोरोना संक्रमण भेटिँदा पुरै टिमको क्वारेन्टिन अवधि ७ दिन बढाइएको थियो।
बबलभित्र रहेकाहरुलाई मैदान र होटलसम्म मात्र जान अनुमति हुन्छ। त्यसबाहेक उनीहरुको फ्यान, साथी या आफन्तले पनि उनीहरुलाई भेट्ने अनुमति पाउँदैनन्।
यदि कसैले बायो बबल तोडे भने?
यसो भए त अफ्ठ्यारो अवस्था आउनेछ। बोर्ड अफ क्रिकेट क्रन्ट्रोल बोर्ड इन इन्डिया (बिसिसिआई) का अनुसार कसैले बायो बबल तोडे आइपिएल कोड अफ कन्डक्टअनुसार कारवाही हुनेछ। खेलाडीले तोडे केही म्याचहरुमा रोक हुन सक्छ। यसमा टिमहरुले पनि कडाइ गरिरहेका छन्। अझ रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्लोर (आरसिबी) ले त बायो बबल तोडे कन्ट्राक्ट नै तोड्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेको छ।
यसअघि बायो बबल कसैले तोडेको छ?
कोरोना महामारी चलिरहँदा इन्टरनेसनल क्रिकेटमा दुई खेलाडीले बायो बबल तोडेको पाइएको छ। पहिलो इङ्ग्ल्याण्ड वेस्ट इण्डिज सिरिजका क्रममा जोफ्रा आर्चरले बायो बबल तोडेर आफ्नो एकजना साथीलाई भेटेका थिए। जसका कारण उनी सेल्फ आइसोलेसनमा जानुपरेको थियो। त्यस्तै उनलाई इङ्ग्ल्याण्डको टिम म्यानेजमेनटले वेस्टि इण्डिजविरुद्धको दोस्रो टेस्टबाट हटाएको थियो।
त्यस्तै इङ्ग्ल्याण्ड टुरमा गएको पाकिस्तानी टिमका मोहम्मद हफिजले पनि बायो बबल तोडेर परिवारसँग भेटेका थिए। जसका कारण उनलाई पाँच दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। यद्यपि त्यसबीच दुईपटक पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनी टिमसँग जोडिएका थिए।
के आइपिएलको बायो बबलसँग सबै सन्तुष्ट छन्?
आइपिएलका लागि टिमहरु दुबइ पुगेर प्रतियोगिता सुरु नहुँदै चेन्नइ सुपर किंग्सका खेलाडी सुरेश रैना टिम छोडेर भारत फर्किएको विषयले चर्चा पायो। सुरुमा चेन्नइले ‘व्यक्तिगत कारण’ ले उनी बाहिरिएको बताए पनि उनको आफन्तसँग भएको आक्रमणलाई जोडेर उनी भारत फर्किएको चर्चा चल्यो। पछि कुरा खुल्दै गयो: उनको होटलको कोठा मन नपरेर विवाद हुँदा भारत फर्किएका थिए।
पछि उनले आइपिएल खेलाडीलाई भनेर तयार गरिएको बायो बबलमा ‘कम्फर्ट’ नभएको बताए।
‘जब बायो बबल नै सुरक्षित छैन भने कसैले कसरी जोखिम लिन सक्छ? मेरा दुई साना बच्चा र बृद्ध भइसकेका अभिभावक हुनुहुन्छ। मेरो लागि परिवारमै फर्कनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो,’ रैनाले भनेका छन्।
भारतीय मिडियाकाअनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका किंग्स ११ पञ्जावका करुन नायर दुई पटक कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएपछि दुबई जान योग्य भएका थिए। त्यस्तै हिन्दुस्तान टाइम्सकाअनुसार एक जना बिसिसिआईका एकजना सदस्यलाई पनि दुबइ पुग्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
युएईमा काम गरिरहेका एक जना अफिसियलले भनेका छन् : कोरोना पोजेटिभका केसहरु भेटिइरहँदा पनि कुनै नयाँ गाइडलाइन ल्याइएको छैन। हुन सक्छ ती बिसिसिआईका अधिकारी यात्राको क्रममा संक्रमित भएका थिए। अहिले कोरोनाको केसहरु जहाँ पनि भेट्न सकिन्छ।’
केन रिचर्डस, लाथिस मालिङ्गालगायतका खेलाडीहरुले आइपिएलबाट नाम फिर्ता लिँदै गर्दा विभिन्न कारणहरु देखाएका छन्। जसमा प्रतियोगिता स्थलको वातावरणबारेको आशंकालगायतका विषयलाई पनि अस्विकार भने गरिएको छैन।
त्यस्तै भारतीय टीमका समेत सदस्य रहेका सन राइजर्स हैदराबादका खेलाडी भुवनेश्वर कुमारले समूहमा अभ्यास गर्न राम्रो लागिरहेको भए पनि सुरक्षाको विषयमा चिन्तित रहेको प्रतिकृया दिएका छन्।
किंग्स ११ पञ्जाबको कोओनर निस वाडिया बायो बबलबारे अझै कडा सुनिन्छन्।
‘सिएसकेको घटनाले हामीलाई उच्च सुरक्षा अपनाउँदा अपनाउँदै पनि यो जहाँ कहीँ पनि हुनसक्छ भनेर सिकाएको छ। त्यसैले हामीले बायो बबल प्रोटोकलमा अधिक आज्ञाकारी र कठोर हुन आवश्यक छ,’ उनले पिटीआईसँग भनेका छन्।